Farmaajo oo bilaabay xakamaynta fashilka uu galay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo bilaabay xakamaynta fashilka uu galay
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa maqaal dheer ku qoray Wargeyska Foreign Policy oo ah majalad laga leeyahay waddanka Mareykanka, waxa uuna ku qoray warbixin uu isku ammaanay, xili uu cariiri galay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxwayne Farmaajo ayaa ku daabacay mareegta Foreign Policy warbixin uu uga hadlayo xaaladda dalka iyo inuusan dambi ku laheen daaha ku yimid doorashadii Soomaaliya oo waqtigeedii la dhaafay.
Warbixinta ayuu cinwaan uga dhigay "Ha igu eedeyn dib udhaca doorashooyinka Soomaaliya" isagoo ula jeeda inuu iska bari yeelo muddo kororsiga dadban ee uu weli ku joogo xafiiska, iyo sidoo kale muddo kororsigii Golaha Shacabka looga dhawaaqay, ee markii dambe inta laga hor yimid dib looga laabtay.
Famaajo ayaa waxii dhacay oo dhan dusha ka saaray mucaaradkii kasoo horjeeday oo lagu daray waddamada Imaaraatka Carabta iyo Kenya oo labadaba xiriir wanaagsan lalahaa dowladihii ka horreeyay tan uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo oo wada shaqeyntii iyo xiriirkii u jartay labadan dal, gaashaan-buur cusubna sameystay, taasoo ay ugu horreeyaan waddamada Qadar, Itoobiya iyo Eratariya.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu isku ammaanay inuu kasoo shaqeeyay waddamada Mareykanka iyo Soomaaliya, uuna yahay halgamaa wayn ee dhanka dimuqraadiyadda isagoo aad u weeraray hannaanka doorashada dadban, taasi baddalkeedana uu door bidayo nidaamka qof iyo cod, isagoo isku haysta inuu yahay hoggaamiye ay jecelyihiin shacabka Soomaaliyeed.
Farmaajo oo galay cariiri siyaasadeed ayaa wada 'damage control' ama xakamaynta fashilka uu galay, wuxuuna qormadaan dheer isku dayayaa sidii uu u dhisi lahaa magaciisa burburay.
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa tilmaamay in ay jiraan shakhsiyaad xannibaya waddada loo maro doorashada guud, waxa uuna leeyahay "Waxay ku adkeysanayaan nidaam doorasho dadban oo ilaaliya awooddooda"
"Muranka khilaafku waa isku dhaca udhaxeeya himilada xukuumadayda ee ah in codbixin guud laga dhigo iyadoo loo marayo doorasho toos ah iyo kuwa ku adkeysanaya qaab doorasho dadban oo awood siineysa dadka aqoonta leh kana celineysa muwaadiniinta caadiga ah cod bixinta" ayuu ku yiri qoraalkiisa Farmaajo.
Wuxuu sheegay in heshiiskii June 2018 ee Baydhabo lagu gaaray doorasho qof iyo cod ah, balse ma uusan raacin in isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada ay is dagaaleen, kuna kala boodeen dhammaan waxyaabihii lagu ballamay, waxa uuna meesha ka saaray saddex kamida madaxweynayaashii saxiixay heshiiskii Baydhabo kuwaasoo kala ahaa Shariix Xasan -kii Koonfur Galbeed, Xaaf -kii Galmudug iyo Cosoblihii Hirshabeelle iyo kii uu ku badalay ee Waare oo isna lagu qasbay inuu is casilo!
Farmaajo wuxuu ka doortay heshiisyadii uu la galay madaxda dowlad goboleedada inuu adeegsado awood ciidan si uu meesha uga saaro, isagoo ku guul darreystay in uu awood ku maquuniyo Axmed Madoobaha Jubbaland ka taliya muddada dheer!
Sidoo kale wuxuu ammaanay nidaamka Federaalka isagoo dowad goboleedyada ku ammaanay habka dimuqraadiga ah ee uu dalku maanta taagan yahay, waxaana lagu soo dhisay shanta dowlad goboleed xildhibaanada labada aqal.
Farmaajo maanta wuxuu taaganyahay "Yaan wax la iga waydiinin dib u dhaca doorashada", waxaan leenahay dalku wuxuu u baahanyahay madax wax laga waydiin karo.